रामकुमारी झाँक्री माधव नेपालको घरभित्रै यस्तो हर्कत गर्न थालेपछि विरोध खतिवडाले चुकुल लगाए ! | Prahar News
रामकुमारी झाँक्री माधव नेपालको घरभित्रै यस्तो हर्कत गर्न थालेपछि विरोध खतिवडाले चुकुल लगाए !
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कार्यान्वयन नगरेपछि बबण्डर मच्चिएको छ । पार्टी भन्दा मन्त्रीहरु शक्तिशाली भएपछि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा रडाको मच्चिएको हो । अध्यक्ष बन्नकै लागि नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएको आरोप खेप्दै आएका माधव नेपालको पार्टीमा पदकै लागि मारामार भएपछि त्यो आरोप थप पुष्टि भएको छ ।